Ch 9 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 9 Asan'ny Apostoly
Asan'ny Apostoly 9
9:1 Ary Saoly, mbola nifofofofo fandrahonana sy nokapohina tamin'ny mpianatry ny Tompo, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy,
9:2 Ary nangataka azy ny taratasy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, amin'izay mba, hitany misy lehilahy na vehivavy ao anatin 'izany fampianarana izany, dia mety hahatonga azy ireo ho babo ho any Jerosalema.
9:3 Ary raha nanao ilay dia, nony fa efa nanakaiky an'i Damaskosy. ary tampoka, nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina azy.
9:4 Ary lavo tamin'ny tany, izy ka nandre feo nanao taminy hoe:, "Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao?"
9:5 Ary hoy izy:, "Iza ianao, Tompo?"Ary: "Izaho no Jesosy, Izay enjehinao. Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. "
9:6 ary, kovitra sy gaga, nanao hoe:, "Tompo ô, inona no tianao hataoko?"
9:7 Ary hoy Jehovah taminy, "Mitsangàna, ka mandehana any an-tanàna, ary any no holazaina aminao izay tokony hataonao. "Ary ny lehilahy izay niaraka taminy dia nijoro gaga, nandre feo tokoa, nefa tsy nahita olona.
9:8 Ary Saoly nitsangana avy teo amin'ny tany. Ary tamin'izay dia fanokafana ny masony, nahita na inona na inona. Ary nitarika azy izy, dia nitondra azy ho any Damaskosy.
9:9 Ary amin'izany toerana, tsy nahita izy nandritra ny telo andro, ary tsy nihinana na nisotro.
9:10 Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana, "Ananiasy!"Ary hoy izy:, "Inty aho, Tompo. "
9:11 Ary hoy Jehovah taminy: "Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ary mitady, ao an-tranon'i Jodasy, ny anankiray atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa, indro, efa mivavaka izy. "
9:12 (Ary Paoly dia nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy, ka mba hahiratra indray ny masony.)
9:13 Fa Ananiasy namaly: "Tompo ô, Efa reko tamin'ny maro ny momba izany lehilahy, tena ratsy izay efa nataony olonao masina tany Jerosalema.
9:14 Ary manana fahefana eto amin'ny mpitarika ny mpisorona mba hamatotra izay rehetra mangataka ny anaranao. "
9:15 Ary hoy Jehovah taminy: "Mandehana, fa ity iray ity dia fitaovana nofidian'ny ahy hampita ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely.
9:16 Fa Izaho kosa haneho aminy fa tena tsy maintsy hiaretany ho an'ny anarako. "
9:17 Ary nandeha Ananiasy. Ary dia niditra tao an-trano. Ary nametra-tanana taminy, hoy izy:: "Ry Saoly rahalahy, ny Tompo Jesoa, Izay niseho taminao teo amin'ny lalana izay tonga, naniraka ahy mba ho mahirata ary mba ho feno ny Fanahy Masina. "
9:18 Ary niaraka tamin'izay dia, dia toy ny hoe efa nodi-kiran'ny hazandrano niala avy tamin'ny masony, ary dia nahiratra ny masony. Ary nitsangana, Natao batisa izy.
9:19 Ary rehefa nandray ny sakafo, izy dia natanjaka. Ary ny tamin'ny mpianatra tany Damaskosy izay andro vitsivitsy.
9:20 Ary Izy foana nitory an'i Jesosy tany amin'ny synagoga: fa Izy no Zanak 'Andriamanitra.
9:21 Ary izay rehetra nandre Azy dia talanjona indrindra, ka hoy izy:, "Tsy io ve ilay, tany Jerosalema, dia namely ireo fitalahoana izany anarana, ary izay tonga eto izao: ka mba hitarika azy any amin ny mpitarika ny mpisorona?"
9:22 Fa Saoly dia nitombo ho bebe kokoa amin'ny fahaizana, ary toy izany koa dia mampifangaro ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy, amin'ny fanamafisana fa izy no Kristy.
9:23 Ary rehefa afaka andro maromaro, vita, ny Jiosy niara-nihevitra toy ny, ka dia mba hamonoany Azy.
9:24 Fa ny famadihana Nanjary fantatr'i Saoly. Ary izy ireo koa dia nijery ny vavahady, andro sy alina, ka dia mba hamonoany Azy.
9:25 Fa ny mpianatra, nitondra azy tamin'ny alina, naniraka azy hanapaka ny manda amin'ny alalan'ny famelana azy tamin'ny sobiky.
9:26 Ary rehefa tonga tany Jerosalema, dia nitady hiray tamin'ny mpianatra. Ary izy rehetra natahotra azy, tsy nino azy ho mpianatra.
9:27 Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy nitokana ho any amin'ny Apôstôly. Ary dia nohazavainy taminy ny nahitany ny Tompo, ary izay nolazainy taminy, ary ahoana no, in Damascus, efa nanao zavatra tamim-pahatokiana amin 'ny anaran' i Jesoa.
9:28 Ary izy niara-, miditra sy niala an'i Jerosalema, ary manao zavatra amim-pahatokiana amin 'ny anaran' ny Tompo.
9:29 Izy koa dia niresaka mbamin'ny jentilisa sy niady hevitra tamin'ny Grika. Anefa izy ireo nitady hamono azy.
9:30 Ary nony efa tonga saina ny rahalahy izany, dia nitondra azy ho any Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy.
9:31 tokoa, Ireo fiangonana dia fiadanana eran'i Jodia sy Galilia ary Samaria, ka dia hiorina hatrany, raha nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo, ka dia ho feno ny fampiononana ny Fanahy Masina.
9:32 Avy eo dia tonga i Petera, araka izay nandeha manodidina na aiza na aiza, tonga teo amin'ny olona masina izay nonina tany Lyda.
9:33 Kanjo tsy hitany misy lehilahy anankiray, atao hoe Enea, izay lehilahy anankiray mararin'ny paralysisa, izay nandry teo am-pandriana nandritra ny valo taona.
9:34 Ary hoy Petera taminy:: "Enea, ny Tompo manasitrana anao Jesosy Kristy. Mitsangàna, ka handamina ny fandrianao. "Ary tamin'izay dia nitsangana teo.
9:35 Ary izay rehetra nonina tany Lyda sy Sarôna nahita azy, ary niova fo ho an'ny Tompo.
9:36 Ary tany Jopa nisy mpianatra atao hoe Tabita, izay ao amin'ny fandikan-teny atao hoe Dorkasy. Izy dia feno ny asa soa sy ny fiantrana izay izy hanatontosa.
9:37 Ary nony fa, tamin'izany andro izany, narary izy ka maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty, dia napetrany tao an-trano ambony.
9:38 Ary satria Lyda akaikin'i Jopa, ny mpianatra, rehefa nandre fa i Petera teo, dia naniraka roa lahy izy, mangataka aminy: "Aza mora eo rehefa tonga tao aminay."
9:39 Ary Petera, eny, nifoha, nandeha niaraka taminy. Ary rehefa tonga, dia nitondra an'i Jesosy ho any an-trano ambony. Ary ny mpitondratena rehetra nitsangana manodidina azy ireo, nitomany sady nampiseho azy ny akanjo sy lamba izay Dorkasy efa natao ho azy ireo.
9:40 Ary rehefa nalefa any ivelany rehetra, Peter, nandohalika, nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty, hoy izy:: "Tabita, mitsangàna. "Dia nahirany ny masony sy, rehefa nahita an'i Petera, niarina indray.
9:41 Ary ny fanatitra hohanina azy ny tanany, dia nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy tao ny mpitondratena, izy dia nanolotra azy velona.
9:42 Ankehitriny, izany dia fantatra eran'i Jopa. Ary maro no nino ny Tompo.
9:43 Ary nony fa nipetraka nandritra ny andro maro tany Jopa, amin'i Simona, mpanao hoditra.